PressReader - Ilanga langeSonto: 2019-01-06 - OWAMAGQUBU OWE-PMB UTD NE-ARROWS
OWAMAGQUBU OWE-PMB UTD NE-ARROWS
Ilanga langeSonto - 2019-01-06 - Ezemidlalo - SENZO SOKHELA
ULALA obenyoni ufarook “Ntshebe” Kadodia oyisikhulu semaritzburg United njengoba ekholwa wukuthi umdlalo womkhaya ozogijinywa ngezakhe nelamontville Golden
Arrows ungase ucacise izinto eziningi ngesimo sekilabhu yakhe.
Choice izobhekana nabafana Bes’thende koweAbsa Premiership namuhla ngesonto ngo15h30 esugar Ray Xulu Stadium, eclermont. Lo mdlalo uthathwa njengomkhulu Kwazulu-natal njengoba kunomoyana wokuthi ihlekisana ihlomile phakathi kwezikhulu zala makilabhu. Kuthiwa isisusa salokhu wokuthi imaritzburg ibizitshela ukuthi isimtholile usteve “Mphathi” Komphela ukuba azokuba ngumqeqeshi wayo kodwa wavele waqoma i-arrows ngemizuzu yokugcina. Igcine isikhalela kumuhsin Ertugral osizwa ngumabhudi “Lion” Khenyeza oyeke ibhola ngeledlule esemabhukwini Amazulu FC.
Okwenza lo mdlalo ube nesasasa wukuthi laba baqeqeshi bake bawalolonga la makilabhu phambilini ngokwahlukana kanti kuzobe kuwumdlalo wabo wokuqala beqhoqhobele izikhundla zabo ezintsha.
Ukadodia uthe ulala obenyoni uma ecabanga ngalo mdlalo we-arrows kwazise ezakhe zihaqwe yizinkinga. “Ubuthongo kangisabazi, kubuhlungu ukubona ikilabhu yami ilele emsileni we- log. Lesi yisimo esinzima, esingabekezeleki. "Siphinda sizobhekana ne-arrows esanda kusigila. Lezi zinto nje zizodwa ziyangihlukumeza emoyeni. Lo mdlalo ufana nowafa wafa kithina, kufanele siwunqobe kumnyama kubomvu ukuze sizame ukuxaxama kule ndawo esikuyona. “Ukuhlulwa kungasilimaza emiqondweni, kuzokwenza izinto zibe nzima. Kodwa-ke ngethembile ngoba ithimba lethu labaqeqeshi lenza kahle futhi nabadlali bakhombisa ukulithanda. Okubi nje wukuthi singase siye kulo mdlalo ngaphandle kwabadlali bethu abamqoka abanokuthinteka. “Unazeer Allie, ufortune Makaringe nomohau Mokate banokuthinteka kanti urushine de Reuck yena udonsa isigwebo samakhadi.
Nokho sizobona ukuthi simisa kanjani ngoba ekugcineni kufanele senze ngakho konke okusemandleni ukuthi siyawunqoba lo mdlalo,” kusho ukadodia.
Limubuza leli phephandaba ukuthi ngabe kuyiqiniso kangakanani ukuthi bafuna undumiso Mabena ongumgadli webloemfontein Celtic, uthe: “Kuyiqiniso, yikhona nje ukuthi usanenkontileka neceltic. Kodwa-ke konke kuzocaca ngokuhamba kwesikhathi ngoba sidinga abadlali abazofike balwele ikilabhu.”
Uthabo “Mfece” Molefe (23) odlala esiswini kwi-arrows, uthi ngeke bakuvumele ukuhlulwa emidlalweni emibili yomkhaya kulandelana.
“Ukuhlulwa kwethu ngamazulu kakuzange kwehle kahle ngakho-ke ngeke nje sivume ukuthi nemaritzburg isehlule kuzofana nokuthi kasilutho emakilabhini akulesi sifundazwe.
"Kulo mdlalo ngiyasaba kungase kudaleke umonakalo ngoba womabili amakilabhu awafuna ephelele la maphuzu.
“Imaritzburg ifuna ukusuka emsileni nathi sifuna ukusuka kule ndawo esikuyona ngoba kayiyinhle. Noma kanjani sizowunqoba lo mdlalo lokho sizokulwela,” kusho umolefe okulindeleke ukuba esiswini agadulisane kanzima nosiphesihle “Mbesuma” Ndlovu ongesinye sezethenjwa zeteam of Choice.
Uthi ukufika kukakomphela kwenze wonke umuntu wavuka emaqandeni. Uthi ufike nolukhulu ushintsho ngakho-ke bazimisele ngokumnqobela umdlalo wakhe wokuqala engumqeqeshi we-arrows.
Komunye umdlalo we-absa Premiership, ibaroka FC izobhekana neblack Leopards namuhla ngesonto ngo-15h30 epeter Mokaba Stadium, epolokwane.